Waa maxay siyaasadda suuqgeynta?
Tan iyo markii Ashine ay bilawday inay u dhoofiso macaamiisha reer Yurub 1995, waxaan diiradda saarnay sidii aan u siin lahayn adeegyada OEM/ODM macaamiisheena adduunka oo dhan. Ashine waxay ku faantaa inay tahay tan ka dambaysa macaamiisheeda, oo ay taageerto sumcadaha waaweyn ee suuqyada.
Maxay yihiin takhasuska shirkaddaadu?
Ashine waxay soo saartaa xariiqda buuxda ee qalabka dheemanka si ay u shiiddo dhulka oo ay u nadiifiso warshaddeeda. Iyada oo leh soosaarid qorsheyn wanaagsan iyo koox QC aad u fiican, joogtaynta tayada ayaa la dammaanad qaaday.
B) Ashine waxay ku leedahay koox heer sare ah R&D warshadaha. Iyada oo in ka badan 200 sano waayo -aragnimo u leh warshadaha, kooxdu waxay awoodday inay u xalliso dhibaatooyinka macaamiisha dalal iyo aagag kala duwan, oo ka caawiso inay horumariyaan aaladda dheemanta saxda ah waqti gaaban si ay ugu guuleystaan ​​tartamada.
C) Iibka Ashine iyo kooxda adeegga macmiilka waxay siiyaan macaamiisheeda adeegyada ugu xirfadda badan. Waad ku mahadsan tahay inaad noo soo dirto emayl oo aad maanta ogaato.
D) Ashine waxay aad ugu fikiraysaa iskaashiga muddada-dheer waxayna had iyo jeer ilaalisaa ballanqaadkeeda macaamiisha. Qiimaha asaasiga ah ee Ashine waa, Daacadnimo iyo Masuuliyad.
Maxaad samaysaa si aad u ilaaliso joogtaynta tayada?
A) Si loo ilaaliyo joogtaynta alaabta ceeriin, Ashine waxay sii wadaysaa la shaqaynta iibiyaasheeda muddada dheer, mana beddesho sahayda alaab qiimo jaban. Dhanka kale, waxaan ku adkaynaynaa QC agabka agabka qalabka xirfadeed ee warshadeena.
B) Badeecadaha qaangaarka ah, Ashine ma beddesho habka wax -soo -saarka iyo curaarta. Waxaan leenahay waayo -aragnimo ah inaan sii wadno soo saarista aalad la mid ah tii ay ahaan jireen 1995.
C) Qayb weyn oo ka mid ah dakhliga Ashine ayaa lagu maalgeliyay casriyeynta khadadka wax -soo -saarka otomaatiga ah sannad kasta. Iyada oo leh mashiinno otomaatig ah oo dheeri ah, waxaan awoodnaa inaan yareynno halista khaladaadka aadanaha oo aan sii wadno joogteynta.
D) Ugu dambayn laakiin ugu muhiimsan, waxaan leenahay nidaam QC oo si fiican loo habeeyay kaas oo u qalma ISO9001, iyo koox QC oo aad u fiican si loo dammaanad qaado tayada tallaabo kasta oo ka mid ah hannaanka wax soo saarka.
Waa maxay wakhtiga dhalmada (wakhtiga hogaaminta)?
Waqtiga dhalmada (waqtiga hogaaminta) caadi ahaan waa qiyaastii 2 toddobaad.
Maxay ku gaar yihiin Kooxdaada R&D?
A) Madaxweynaha Ashine, Mr. Richard Deng, wuxuu ka mid yahay ardaydii ugu horraysay ee shahaadada masterka ka qaatay Diamond Major ee Shiinaha. In ka badan 30 sano oo waayo -aragnimo ah, waxaa si weyn loogu xushmeeyaa khabiir ahaan xirfadlayaashiisa isla warshadaha.
B) Injineerka Sare, Mr. Zeng, oo mas'uul ka ah kooxdayada R&D, wuxuu leeyahay waayo -aragnimo ka badan 30 sano xagga horumarinta aaladaha dheemanka ee dhammaan codsiyada.
C) Ka sokow injineerada warshadda, kooxdayada R&D waxaa ku jira dhowr macallimiin iyo kooxda cilmi -baarista ee Jaamacadda Sichuan, Jaamacadda Xiamen iyo CMU, kuwaas oo naga caawiya sidii aan u horumarin lahayn tiknolojiyadda cusub oo aan u ilaalin lahayn hal -abuurnimadeena.
D) Ashine waxay maalgelisaa qalabka tijaabinta ugu fiican uguna xirfadda badan ee adeegsiga R&D, sidoo kale waxay horumarisaa qalab gaar ah oo lagu tijaabiyo curaarta maalin kasta.
Miyaad hore u iibisay Yurub / Ameerika / Aasiya? Hadda ma leedahay qaar ka mid ah shuraakada?
Haa, Ashine waxay siisaa aaladaha dheemanka adduunka oo dhan iyo 95% dhoofinta dibedda, waxaan leenahay shuraako dhow Yurub/Ameerika/Aasiya, suuqa ugu weyn waa Ameerika, Scandinavia, Germany, Japan & Pacific, fadlan nagala soo xiriir macluumaadka suuqa gaarka ah.
Waa maxay bandhigyada aad ka qaybgashay?
Ashine waxay ka qaybgashaa bandhigyo caalami ah oo xirfadeed sida WOC (World of Concrete), Munich Bauma Fair, Xiamen Stone Fair, Intermat Paris, Marmomacc Fair. Ku soo dhawow si aad u hubiso macluumaadka bandhigyada sida hoos ku qoran:
Sida loo doorto qalabka saxda ah?
Su'aal wanaagsan, waxaan haysannaa xal dhammaystiran oo loogu talagalay diyaarinta sagxadda, shiidi, nadiifinta iyo dayactirka. Ku soo DHAWOOWnala soo xiriir iimayl ahaan ama wac si aad u hesho taladaada gaarka ah.
Sideen ku ogaadaa tayada alaabtaada?
Fadlan raac Ashine HomePage ee Dhexdhexaadinta Bulshada sida hoose, waxaa jira daraasado kala duwan oo kiisaska iyo tijaabooyinka isbarbar dhigga, haddii aad dan kale leedahay, fadlan nala soo xiriir si aan u tijaabino shaybaarka qaarkood.
Haddii ay jiraan dhibaatooyin xagga tayada ah, maxaad samayn doontaa?
Daacadnimada iyo Mas'uuliyadda ayaa ah qiyamkayaga asaasiga ah ee la shaqaynta shuraakada muddada dheer. Ashine waxay mas'uul ka tahay 100% dhibaatooyinka tayada, falanqaynta farsamada, fadlan noo soo dir qaar ka mid ah sawirrada alaabta aan u qalmin oo noo sheeg waxa dhacay, tusaale ahaan, xaaladda sagxadda, mashiinnada, iyo intee in le'eg ayay shaqeyneysay qalabku, haddii loo baahdo Waxaan ku weydiin doonaa raalli inaad dib ugu celiso oo kuu soo dirto beddelaad isla markaan ogaanno sababta.
Ma bixisaa shaybaarro bilaash ah?
Maya. Halkii, waxaan dhegeysaneynaa warcelinta iyo 100% adeegga kadib.
Waa maxay waqtiga dhalmadaada?
3-15 maalmood ayaa horseed u ah wax-soo-saarka waqtiga-kaliya.
Waa maxay MOQ (Tirada Dalabka Ugu Yar)?
20pcs MoQ ee shay kasta/qeexitaan kasta.
Waa sidee xirmada suufkaagu?
Waxaan bixinnaa 3pcs set, 6pcs set, 9pcs dhigay sanduuq gudaha ah oo kala duwan. Si loo habeeyo haddii dalabka badan.
Waa maxay shuruudaha lacag bixintaada?
Lacag hormaris ah ka hor inta aan la soo saarin.
Suumanka Nadiifinta La -taaban karo, Kabaha shiidi la taaban karo, Kabaha Shiida Dheemanka, Trapezoids Kabaha Shiidi Dheemanka, Birta Ku Xidhan Dheemannada Shiidi Kara, Kabaha Shiidi PCD,